Home Wararka Gudaha Waa kuma Ra’iisal wasaaraha cusub ee la magacaabay?
Waa kuma Ra’iisal wasaaraha cusub ee la magacaabay?
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa Ra’iisal wasaare u magacaabay Xamsa Cabdi Barre oo ah xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka xubin ka ahaa xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh.
Xamse Cabdi Barre waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo gobolka Jubbada hoose ee koonfurta Soomaaliya horraantii 1970.
Waxbarashadiisa aasaasiga ah, dugsiga hoose, dhex iyo sare waxa uu ku qaaday gudaha dalka. Jaamacadda heerka koowaad waxa uu kusoo dhigtay waddanka Yemen, halka shahaadada heerka labaad uu kusoo qaatay jaamacad ku taalla dalka Malaysia.
Hadda waa xildhibaan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka ah ee Soomaaliya, oo laga soo doortay Jubbaland.
Wuxuu xubin ka yahay Xisbiga Nabadda iyo Horumarinta ee uu hoggaanka uu u hayay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo uu horay uga soo noqday xoghaye.
Inkastoo uu shaqooyin kala duwan kasoo qabtay xafiisyada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, magaciisa waxa uu si wayn u soo shaac-baxay markii uu noqday guddoomiyihii guddiga doorashada ee Jubbaland, intii u dhaxeysay 2019-kii ilaa 2020-kii.
Intii u dhaxeysay 2014-kii ilaa 2015-kii waxa uu la-taliyaha dhinaca maamulka ah u ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho ee xilligaas, Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab).
Howlaha kale ee uu Xamsa soo qabtay waxaa ka mid ah in uu la-taliye sare kasoo noqday Wasaaradda Arrimaha Dastuurka iyo Federaaleynta.
Tan iyo markii uu soo dhowaaday waqtiga gabagabada ah ee uu Madaxweyne Xasan Sheekh u haysto ku dhawaaqista raysul wasaarihiisa, waxaa baraha bulshada la iskula dhex marayay in siyaasiggan uu noqon karo qofka la xulanayo.
Xamsa ayaa xilka kala wareegaya Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo hadda ah Ra’iisul wasaaraha xil-gaarsiinta ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Previous articleMaxaa looga hadlay kulankii maanta ee Golaha shacabka?
Next articleshil gaadhi oo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Wasiirka Maaliyadda Hir-Shabeelle Mohamed Dheere ayaa Xil ka qadiis ku sameeyay Mareeyahii Maaliyadda Garoonka Diyaaradaha Ugaas Khalif ee Magaalada Beledweyne Cali Farxaan
Dhallinyarada kasoo jeeda gobolka Hiiraan ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan sodhaweyn ah u sameeyay guddoomiyaha Ururka Dhallinyarada (Sawiiro)
Wadfi Madaxweyne Xasan Sheekh ku matali doono shir oo u ambabaxay Nairobi
Shidaal la’aan soo wajahday magaalooyinka waaweyn ee Itoobiya
Kenya & Cuba oo ka wada hadlay dhaqaatiirta u afduuban Al-Shabaab
Xiisadda Ruushka iyo Bulgaria oo xoogeysatay
Maqaayad Villa Somalia uu ku lahaa Xildhibaan horre Nour Idow oo...
Madaafiic lagu weeraray Garoonka Diyaaradaha Dhuusamareeb
Tirada dadka Kenyaanka ah ee soo food saartay abaarta oo kor...